Nosamborina Ilay Bilaogera Egyptiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Desambra 2017 3:26 GMT
Hoy ny bilaogin'i Manal sy Alaa hoe :
Abdolkarim Nabil Seliman, mpikatroka mpiaro ny zon'ny vehivavy sady mpifandray amin'ny Copts United .
Mamoaka lahatsoratra ao amin'ny bilaogy iray tantanany ihany koa izy ankoatra ny fanoratana ao amin'ny Civic Dialogue .
Vakio: Komity Mpiaro Ny Bilaogera , Bilaogy Egyptiana, ary http://technorati.com/tag/abdolkarim
Vaovao farany: Araka an'i Alaa, samy nitsidika ny fianakavian'i Abdel Karims avokoa ny digressing sy ny MalcomeX mba hanampy azy ireo kanefa nitatitra i Baheyya (ary nanamafy izany i Alaa ) fa mety ho mafy ny mahazo azy satria tena sahy miteniteny loatra amin'ny fanoherana ny finoana Islamo izy.
Fanampiny: Nandefa mailaka tany amin'ny bilaogera iray hafa (http://endehash.manalaa.net) i Abdolkarim ary nilaza taminy fa tsy matahotra ny hamoaka ny anarany mihitsy izy ao anatin'ny fanehoan-kevitra, satria mihevitra izy fa tsy mihoatra ny tsipika mena ny lahatsoratra saropady momba ny fivavahana izay nosoratany. Nolazainy ihany koa fa matahotra ny vokany izy satria efa nisy ny jiolahim-boto niafina nanafika sy nikasa ny hidaroka azy.
http://endehash.manalaa.net/kareem [via: Mostafa]